Street Photography မှာ အဖြူအမည်း သို့မဟုတ် ကာလာအဖြစ်ထားဖို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ? – Featured Collectives
Featured Collectives, Shades & Lights, Street Photography, StreetPhoto_Color, Thi Ha Thu, THT, Up Close/ In Your Face
“Green Umbrella” – James Maher
Eric – Street ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ဘယ်လိုအချိန်မှာ အဖြူအမည်း ဒါမှမဟုတ် ကာလာနဲ့ဖြစ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မကြာခဏဆိုသလို ဓာတ်ပုံအသိုင်းအဝိုင်းက ကျနော့်ကို မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ကျနော့်ကိုကျနော် နေ့စဉ်မေးမိတဲ့ မေးခွန်းလည်းဖြစ်ပြီး သိပ်ထူးချွန်တဲ့ နျူးယောက်က Street ဓာတ်ပုံရိုက်သူ James Maher ကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
James – Street Photography ဆိုတာ ရှိခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝနှစ်ကျော်အချိန်တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်သူဟာ အိမ်ကမထွက်ခင်ကတည်းက ကာလာဖလင်လား အဖြူအမည်းဖလင်သုံးမှာလား ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့အတော့်ကို ဇိမ်ကျနေပါပြီ။ ကာလာလား အဖြူအမည်းလားဆိုတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါဟာ ဆုံးဖြတ်ဖို့လည်း တော်တော်ခက်ပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ် ဓာတ်ပုံသမားတွေဟာ ရှေးကဆရာကြီးတွေကို အတုယူပြီး ဓာတ်ပုံအားလုံးကို အဖြူအမည်းပြောင်းကြတာကို ကျနော် မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရိုက်ကိုမရိုက်တော့ဘူး။ ဒီကိစ္စကို သေသေချာချာ မတွေးတောခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဟာ သူ့ရဲ့အလားအလာရှိသလောက် ဖြစ်မလာတာကို ကြည့်မြင်ရတဲ့အခါ ဒေါသထွက်ဖို့တောင်ကောင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဆုံးဖြတ်ချက် (အဖြူအမည်းလား ကာလာလား)ကို အကောင်းဆုံးချမှတ်နိုင်ဖို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ပုံတစ်ပုံရဲ့ အဓိကအာရုံစိုက်ရာကိုတောင် လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဂျစ်တယ်ပုံတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကာလာ/အဖြူအမည်းထားဖို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ပထမဦးဆုံး ကျနော်ကြိုးစားပါတယ်။
ကျနော် တစ်ကိုယ်ရေအသုံးပြုတဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ မြင်ကွင်းကို အရောင်က ဘာမှထပ်မဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင် အရောင်ကို ကျနော်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို အရောင်က ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးတဲ့ သိသိသာသာအချက်ရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သိသိသာသာအချက်မှမရှိရင်တော့ ဘာမှထပ်မဖြည့်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ပါ။
အခု တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အားသာချက်တွေပြောကြည့်ရအောင်။ ယေဘုယျခြုံပြောတာတွေရှိမှာဖြစ်ပြီး အမြဲမမှန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတွေရဲ့အမြင်ကို ပြောချင်တယ်ဆို ဆောင်းပါးအောက်မှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခါက ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ အများရဲ့အမြ်ငကို မေးဖူးပါတယ်။ အဖြေက ကာလာ၊ အဖြူအမည်းသုံးဖို့ ၅၅/၄၅ ရာနှုန်းစီ ဆန္ဒပြုကြတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အမြင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
“Waiting in Grand Central” – James Maher
အရောင်တစ်ခုမှမပါရင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ နေရာတိုင်းဟာ ကြည့်တဲ့မျက်စိအတွက် တပြေးညီအနေအထားက စတင်တဲ့အတွက် ပုံသဏ္ဌာန်တွေ၊ လိုင်းတွေ နဲ့ မတူညီမှုတွေဟာ ပိုထင်ရှားလာပြီး ပိုအရေးပါပါတယ်။
ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တွေဟာ ပိုအားကောင်းပြီး ပိုဇာတ်ဆန်သွားတယ်။ မျက်နှာတွေနဲ့ အသွင်အပြင်တွေဟာ ပိုပြီး အလေးပေးဖော်ပြခံရတယ်။
ဝေဝါးမှု (blur) နဲ့ အစက်အပြောက်ထမှု (grain) ဟာ အဖြူအမည်းမှာ ပိုကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတယ်။ ISO အမြင့်မှာ ရိုက်လို့ ကာလာအစက်အပြောက်တွေထတာ များနေရင် အဖြူအမည်းပြောင်းလိုက်တာက ပြုပြင်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် အဖြူအမည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြူအမည်းအသုံးပြုခြင်းက လက်ရှိခေတ်က အခိုက်အတန့်ကို ဂန္တဝင်ဟန်ပေါက်စေပါတယ်။
(အဖြူအမည်း) ဓာတ်ပုံတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်ပိုလေးနက်ပုံပေါ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ အတွေးပိုစေပါတယ်။
ပုံစံ (patterns) နဲ့ အချော/အကြမ်းအနေအထား (textures) တို့က ပိုမိုပေါ်လွင်လာ (သို့မဟုတ်) စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလာပါတယ်။ (ကာလာမှာလည်း ဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။)
“Blonde” – James Maher
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ကာလာအတွက် ကြားလယ်နေရာ မရှိပါဘူး။ မြင်ကွင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လား၊ မဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးလား ဒါပါပဲ။ ဖြည့်ပေး မပေးအတွက် စတင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတာကတော့ ကာလာဟာ ကြည့်ရ ပိုလှတာပါပဲ။ ပြောရတာ ရိုးရှင်းပုံရှိပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပုံဟာဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေ အရောင်တွေဟာ သိပ်လှတဲ့အတွက်ကို ဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။
အရောင်တွေဟာ ရယ်ရွှင်ဖွယ်သို့မဟုတ် ရွှတ်နောက်နောက်အခြေအနေတွေကို ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။
မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးမယ်ဆိုရင် အရောင်ဟာ ဘယ်လို စိတ်အခြေအနေကိုမဆို ပိုအားကောင်းစေတယ်။ အပြာရောင်တွေက ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ပိုလွမ်းမောဖွယ်ဖြစ်စေပြီး အနီရောင်တွေက ပိုမြူးကြွစေ သို့မဟုတ် ဒေါသထွက်စေတယ်။ အညိုရောင်တွေနဲ့ မတောက်ပတဲ့အရောင်တွေကတော့ ပိုပြီး စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံကပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် အရောင်ဟာ အရေးပါနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က “Blonde” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလိုမျိုးမှာပေါ့။
အရောင်ဟာ ပုံရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ (အဲဒီအရာက အားသာတဲ့ အရောင်ဖြစ်နေရင်) ကို ပိုအာရုံစိုက်စေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အရေးမကြီးတဲ့အရာက မြင်ကွင်မှာ အားသာတဲ့အရောင်ဖြစ်နေရင် ပုံရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကို ဖုံးသွားနိုင်တယ်။
တစ်ရောင်နဲ့တစ်ရောင် လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ အရောင်နှစ်ခုကို ကစားလိုက်ရင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ် အားကောင်းတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေတယ်။
အရောင်တွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအတွက် အရေးပါနိုင်တယ်။ မကြာသေးမီက ကျနော် မက္ကဆီကိုမှာ Street ရိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ အရောင်တွေဟာ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျနော် အရောင်တွေကို မဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်ဟာ များသောအားဖြင့် အဖြူအမည်း ၇၅% လုပ်လေ့ရှိပြီး ဒီမှာတော့ ၉၉% ဓာတ်ပုံတွေကို ကာလာအဖြစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
“Valladolid Mexico” – James Maher
ဒီမှာ ကျနော့်ပုံအချို့နဲ့ ဘာလို့ အဖြူအမည်း သို့မဟုတ် ကာလာအဖြစ်ထားသလဲကို ပြောပြသွားပါမယ်။ စာဖတ်သူတို့မှာ မတူတဲ့အမြင်တွေရှိရင် ကြားချင်မိပါတယ်။
“Catcall” – James Maher
ဒီ “Catcall” ဆိုတဲ့ပုံမှာ ကျနော် သဘောထားကွဲလွဲမိပါတယ်။ အဖြူအမည်းပုံကြည့်ရတာ ကြိုက်ပြီး မျက်နှာအမူအရာကို ပိုအာရုံစိုက်စေတယ်။ အဲဒါက ဓာတ်ပုံရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာပါပဲ။ တစ်ဖက်ကလည်း အရောင်နဲ့ပုံမှာ မျက်နှာက ပေါ်လွင်ပြီးသားဖြစ်လို့ နောက်ထပ်အကူအညီ မလိုပါဘူး။ အရောင်နဲ့ပုံမှာ နေကြာပန်းတွေ ပေါ်လာပြီး အဲဒါက ပုံရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအပိုင်းကို ထပ်ဖြည့်ပေးတယ်။ နောက်ပြီး သူက ခေါ်နေတဲ့ သူရဲ့ အလင်းပြန်ပုံရိပ်ကိုလည်း ပြတင်းပေါက်မှာ သွားတွေ့ရတယ်။
“Catcall” အတွက် ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကာလာ
“Hands” – James Maher
“Hands” ပုံကတော့ အကြောင်းပြချက်မရှိရင် အရောင်နဲ့ပဲ ကြည့်မိတဲ့ ပုံတွေထဲကတစ်ပုံပါပဲ။ ဒီမှာ အဓိကအကြောင်းအရာက လက်တွေနဲ့ မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီး အဖြူအမည်းက ပိုမြင်သာစေတယ်။ တီရှပ်နှစ်ထည်က အရောင်တွေဟာ အာရုံလွဲစေပြီး ပုံကို ထပ်မဖြည့်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီအနေအထားကို ဖမ်းနိုင်ဖို့ မြန်မြန်ရိုက်လိုက်ရတဲ့အတွက် ပုံဟာ နည်းနည်းဝါးနေပြီး ဒါဟာ အဖြူအမည်းမှာ ပိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။
“Hands” အတွက် ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အဖြူအမည်း
“Metal Head” – James Maher
“Metal Head” ပုံက ရွေးရခက်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ကျနော် အဖြူအမည်းပြောင်းလိုက်မှာပါ။ နောက်ပြီး အနောက်က လိမ္မော်ရောင်က အာရုံလွှဲစေတယ်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်တုန်းက ထင်မိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီမြင်ကွင်းကို ဆွေးမြေ့ရတာထက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေချင်တယ်။ လိမ္မော်ရောင်နဲ့ ကာလာအဖြစ်ထားခြင်းက အဲဒီလိုဖြစ်စေတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
“Metal Head” အတွက် ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကာလာ
“Under the Manhattan Municipal Building” – James Maher
လွယ်တဲ့ပုံတစ်ပုံလောက်ပြမယ်လို့ ကျနော်တွေးမိတယ်။ “Under the Manhattan Municipal Building” ပုံမှာ အလင်းကျနေတဲ့နေရာတွေ၊ အလင်းအမှောင်သိသိသာသာကွဲခြားမှုတွေနဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တွေဟာ အရေးပါပါတယ်။ အရောင်နဲ့လည်း ကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်ပေမဲ့ အရောင်ဟာ ကြားဝင်ရှုပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဖြူအမည်းမှာ ပုံသဏ္ဌာန်တွေ ပိုထင်ရှားပြီး ပိုအားကောင်းလာတယ်။ ပုံဟာလည်း အချိန်ကာလ မရွေးတဲ့ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်လာတယ်။
“Under the Manhattan Municipal Building” အတွက် ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အဖြူအမည်း
ဒါတွေအားလုံးဟာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အမြင်တွေပါပဲ။ စာဖတ်သူမှာ မှတ်ချက်၊ မေးခွန်း၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် ထပ်ဖြည့်ချင်တဲ့ အချက်တွေရှိရင် ဆောင်းပါးအောက်မှာ ရေးသားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးလိုကလည်း မေးနိုင်ပါတယ်။
James Maher ဟာ နျူးယောက်မြို့မှာ အခြေပြုတဲ့ ဓာတ်ပုံသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ နျူးယောက် Street Photography ကို အဓိကထားပြီး စာဖတ်သူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပညာတို့တက်ဖို့အတွက် အကြံပြုချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့ကို facebook နဲ့ twitter မှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ Street Photography မှာ အဖြူအမည်း နဲ့ ကာလာကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ စာဖတ်သူတို့ရဲ့အမြင်ကို မှတ်ချက်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
(Eric Kim ရဲ့ ဘလော့အတွက် James Maher ရေးတဲ့ Black and White or Color in Street Photography: How Do You Make the Decision? ဆောင်းပါးကို THT မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသည်။
ာသာပြန် – THT